Tsy misy ranomaso tsy misy setroka fotsy fluted labozia - China Litbright Candle (Shijiazhuang)
Tsy misy ranomaso tsy misy setroka fotsy fluted labozia
Fototra Info Model No .: G65CL-0625D Type: Tapered Material: Paraffin ny savoka Usage: fandevenana, Holiday, SPA, Fivavahana, fampakaram-bady, Antoko, Birthday, Home Jiro, HAINGOTRANO andrakitra: Lighting Color: White tsirony: Unscented Size: 8 * 20cm fandoroana Time: 8H Processing: milina Diameter, 2.2cm: Length: 22.5cm Additional Info fonosana: shrinked na kitapo fonosana Famokarana: 36tons Brand: Litbright Fitaterana: Ocean, Land, Air, TNT DHL UPS toerana niaviany: China Supply Fahaizana: 3 × 20'fcl Certifi ...
Modely No .: G65CL-0625D
Savaivony, 2.2cm: Length: 22.5cm
Fonosana: shrinked na kitapo fonosana
Fitaterana: Ocean, Land, Air, TNT DHL UPS
Supply Fahaizana: 3 × 20'fcl
Taratasy fanamarinana: BSCI BV MSDS
Fluted labozia fotsy, mena maro fluted labozia, taper labozia fotsy, multi-taper labozia miloko. Ny ara-nofo dia 100% ny iray Paraffin ny savoka ny hafa dia 70% paraffin savoka, ary 30% menaka voanio. Ny packagings no polybag fonosana, efajoro fonosana, hihemotra famonosana sy cellophane fonosana, isika koa dia afaka mamokatra ny fonosana araka ny mpanjifa 'fepetra. Ny loko dia: fotsy, mainty, maitso, mavo, manga ... misy loko dia afaka misafidy. Ny toetra dia dripless, smokeless, odorless, mpandrendrika avo pas (58 ° C-60 ° C). Ny tokantrano dia manana labozia maro samy hafa sy ny maro samy hafa grammers habe, ny grammers dia avy 7g ny 100g, ny savaivony dia avy 1.1cm ny 2.5cm. dia afaka mamokatra ny grammes, diameters halavany sy ny marika araka ny mpanjifa 'fepetra.
Hebei China (Tanibe)
Savaivony: 2cm Length: 27.5cm
Litbright Candle Factory dia naorina teo an nineties taonjato farany. Amin'ny maha-orinasa mpanamboatra miaraka amin'ny tanibe Shina, dia efa mihoatra ny 10 taona ny fanondranana labozia. Ny orinasa dia tokony ho 48.000 faritra metatra tora-droa, ary isika dia iray amin'ireo labozia lehibe indrindra mpanamboatra ao Hebei. Manana ny 800skilled mpiasa sy 40 teknisiana. Ny famokarana fahaiza-: 4 × 20 'fitoeran /day.These dia ny zavatra tsara kalitao sady nandroso fikasana, izay tena malaza eo amin'ny mpanjifa. Ny vokatra efa naondrana any Amerika, Eoropa, Afrika sy Aostralia, sns mihoatra ny valo-polo firenena.
Weight: 10,12g, 20g, 22g, 23g, 25g, 28g, 30g, 32g, 35g, 40g, 45g, 50g, 55g, 60g, 75g, 80g, 85g, 90g, 95g, 100g, sns
Fonosana: cellophane, harona plastika, efajoro, Kraft taratasy
Raw Material: Paraffin savoka, Stearic Acid
High mpandrendrika teboka: 58 ° C - 60 ° C
2. OEM nanaiky
3. Production Arrangment Ampahafantaro ara-potoana
Next: Tokantrano labozia miloko manao sakafo
Tsy misy ranomaso tsy misy setroka fotsy mamirapiratra labozia
Paraffin savoka tsy misy tanana ankohonany labozia fotsy
Factory vidin'ny fampiasana isan'andro unscented househo fotsy ...
Walmart labozia ny fivarotana lehibe amin'ny vidiny tsara